Best Way To Whiten Teeth | Best Way to whiten Ezé Guide
posts akpado "ụzọ kasị mma whiten ezé"
Ezé whitening - Prevention dị mma karịa ọgwụgwọ
Anyị ezé ndị dị oké mkpa. Anyị na-eji ha mgbe niile na-eri ihe ma na-ekwu okwu, etc. were ndụ na-enweghị ha. Ha na-ekwu na ị na-adịghị na-asa ezé gị – dị nnọọ ka ị chọrọ ịnọgide. Ya mere ịnọgide na-enwe ha bụ kwesịrị. Anyị nile chọrọ na-acha ọcha na-egbuke ezé na anyị na-ahụ mkpọsa ngwá ahịa, magazin etc. iji nweta ha, anyị na-eji ụzọ kasị mma whiten ezé. whitening ibe, ntacha eze, whitening asacha ma ọ bụ ọgwụgwọ na ụlọ nwere ike ịbụ otu n'ime kasị mma isi whiten ezé.
Mgbochi dị mma karịa ọgwụgwọ. Na-elekọta anyị ezé ga-amalite mgbe anyị na-eto eto. Mgbe anyị dị obere, a gwara anyị ghara iri ukwuu ụtọ, chọkọletị ma ọ bụ ihe ọ bụla acidic ọṅụṅụ iji gbochie anyị ezé atụgharị odo. ise siga, caffeine, merela agadi na ọgwụ ọjọọ nwere ike n'iku anyị ezé dị ka nke ọma. Ọ bụ ya mere na anyị kwesịrị ịma na ụzọ kasị mma whiten ezé, n'ihi na anyị na-maara ma gbochie ndị na-achọghị ihe ike ezé stains.
Atụmatụ na iji Gbochie Ezé Stains
Ahịhịa na floss mgbe nile. Nke a bụ mfe ọtụtụ isi isi gbochie ezé Unyi.
Whitening ntacha eze dị ebe niile. Ha nwere ike zụta ke oriri na pharmacies na mmefu ego enyi na enyi ahịa. Ha nnọọ n'ihu ọha na ha nwere ike whiten ezé ma n'ezie ha nwere ike dị nnọọ ikpe whiten ezé. Ọzọkwa jide n'aka na ha na-akara na a akara ya mma ma clinically gosiri na whiten ezé.
Ka anyị na-ekiri ihe anyị na-aṅụ. Ọṅụṅụ na ndị ọgaranya na caffeine dị ka kọfị, soda, tii, etc. bụ onye mere mpu. Ịnọ n'ebe ndị a ma ọ bụ na-agbalị iji ha n'ókè dị nta.
Ise siga adịghị nnọọ imebi gị n'akpa ume na akpụkpọ; ha onwe-ha imebi ma daa mbà n'obi ezé gị na-enye anyị ihe ndị mere ịnọ n'ebe ha.
Ụfọdụ n'ime mkpụrụ ọgwụ anyị na-nwekwara ike ime ka n'iku anyị ezé. Lezienụ anya maka Tetraclyne Ọgwụ nje ahụ nwere ike daa mbà n'obi anyị ezé.
Whitening ibe na mm uo ozi nwekwara ike ịbụ na ụzọ kasị mma whiten ezé, e nwere ọtụtụ n'ime ha n'elu counter na-adịghị na oké ọnụ.
Were home whitening trays gị ụlọ nwere ike ịbụ oké ọnụ, ma ndị a bụ omenala kwesịrị ekwesị n'ihi na gị n'ihi na nke a nwere ike ịbụ ụzọ kasị mma whiten ezé na ga-enyere gị whiten ndị ezé ebe ọ bụ na ha na-enyere hụ na bleach mụ na kọntaktị na ezé nke kacha enwu gbaa.
Ọ bụrụ na ihe niile ọzọ ida. Nke a bụ ikpeazụ gị nhọrọ na-ahọrọ ụzọ kasị mma whiten ezé bụ ịtụle Bonding ma ọ bụ poselin veneers, ha na-eri a otutu ma ha ga-edozi ihe niile obi nkoropụ na whitening ezé.
Ndị a bụ nanị ụfọdụ ụzọ kasị mma whiten ezé O nwere ike inyere-eme ka ezé gị anya vibrant na onwunwu. Ma na-egbochi ha bụ mgbe niile ka mma karịa ọgwụgwọ. Ya mere ịnọ n'ebe ndị nwere ike n'iku ezé gị iji ọnụ ọchị n'ụzọ nile. Ọ bụrụ na ị nwere afọ ojuju na ndị Atụmatụ, i nwere ike dị ka mma chọọ n'elu internet n'ihi na ihe ikwu banyere ihe ụzọ kasị mma whiten ezé.
Ihe site whiten Ezé Guide - June 5, 2016 na 12:15 AM
Categories: Whiten Ezé Atụmatụ Tags: ụzọ kasị mma whiten ezé, home enwu gbaa, Atụmatụ na iji Gbochie Ezé Stains, acha ọcha na-egbuke ezé, whiten ezé